Poetry » ဖွင့်မရတဲ့ ဦးနှောက်	2
Posted by ko six on Jan 5, 2017 in Poetry |2comments
ko six has written 70 post in this Website..
Log in to Reply	+1	LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.
Comments By PostMarijuana - ဆေးခြောက် - kai - Thint Aye Yeikအဝင်ကော - Thint Aye Yeikအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - kai - kaiကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik''ဤ''ကို ခပ်လွယ်လွယ်--ကျွဲချင်သူတွေ များလွန်းတော့လည်း... - Thint Aye Yeik - Thint Aye Yeik၀မ်း ဗိုက် ပြားချက်နေဖို့ မနက်ခင်း တိုင်းစားပေးသင့်တဲ့ အရာ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikထူးမြတ်သောသွေးလှူခြင်း - aye.kk - etoneမြသပိတ်ရေပြာအိုင် - သျှားသက်မာန် - Ma Eiကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikဖွင့်မရတဲ့ ဦးနှောက် - ဂျစ်စူ - Thint Aye Yeikချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - ဂျစ်စူ - aye.kk" အငုံ့စိတ် " - ဂျစ်စူ - Thint Aye Yeikအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - ဂျစ်စူကဗျာလေး မူးနေပြီ - aye.kk - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်နာဂတောင်တန်းတွေဆီက ပျံ့လွင့်လာတဲ့တေးသွားများနဲ့နှစ်ကူးပွဲတော် - သျှားသက်မာန် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်ယာဉ်အို စက်ဟောင်း ထိန်းမောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - Thint Aye Yeikဘီယာသောက်တဲ့ ပုဇွန် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - ဇီဇီစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၂)-NEO-CLASSICISM တွေ ထွက်ခဲ့ဟေ့ - Thint Aye Yeik - ဂျစ်စူချစ်ခြင်းပုံပြင် နိဒါန်း - sorrow - CrystallineThe Sense of Traveling - sorrow - sorrowဖွဲတစ်ဆုပ်... - sorrow - ဦးကျောက်ခဲခရီးသွားခြင်းကသင်ပေးသည့်အရာများ ******************************************* - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik"ပြည့် " - aye.kkစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၁)- မျှစ်ကြော်ရဲ့လက်သီးချက်ကို မြည်းစမ်းခြင်း - Thint Aye Yeik - ဇီဇီ​မွေး​နေ့ဆိုတာ - Thint Aye Yeikအလင်းဆက် ကျိုက်ထီးရိုးသွားတုန်းက.... - Thint Aye Yeik - အလင်းဆက်ကျိုက်ထီးရိုး ကေဘယ်ကား - သျှားသက်မာန် - Darli May Ayeအပျော် - ko six - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်" ၁၆ အလွန် ၁၇ " - Darli May Ayeစည်းကမ်းတဲ့လား...လိုက်နာချင်စိတ်က အဓိက... - kai - Thint Aye Yeiki carry your heart with me (i carry it in - ၀င့်ပြုံးမြင့် - uncle gyiကမ္ဘာမြေဆွဲအား ကို ဆန့်ကျင် ထွန်းပနေတဲ့ ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုး .. - ၀င့်ပြုံးမြင့် - Thint Aye Yeikအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတတ်ကျွမ်းလိုသော် - (၉) ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik🌲🌲🌲တိမ်ပင်လယ်ပေါ်က အေးမြတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးသံတောင်ဆီ🌸 - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ - kai - kaiအံဖွယ်တန်ခိုး ကျိုက်ထီးရိုး - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ လည်ပတ်စရာနေရာများထဲမှာ Garden By the Bay(ပုံပါ) - သျှားသက်မာန် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်"စိတ်မာဆတ်" - Foolish Girl - Thint Aye YeikCategory	Arts & Humanities